China Fonosana taratasy fidiovana taratasy fidiovana an-tsinina, azo esorina, fonosana 5, 250 ct isaky ny fanamboarana sy ny orinasa | Zhonghe
Fonosana fonosana fanamoriana taratasy tsy azo ampiasaina, azo esorina, fonosana 5, 250 ct tsirairay avy
STYLE HALF FOLD-Ireo fonosana fipetrahana ao anaty fidiovana ireo dia fomba antsasa-manilaka mba hahamora ny fanesorana azy ireo amin'ny baoritra. Mahatonga ny filana tolona sy adin-tsaina kely kokoa izany rehefa manandrana mamoaka azy ireo. Fonosana taratasy fidiovana taratasy fidiovana tsy misy fandroana ankizy sy zazakely mpiaro seza fiofanana ao anaty boaty boaty - ho an'ny mpitsangatsangana ho an'ny daholobe ho an'ny lehilahy vehivavy olon-dehibe, fonosana 5, 250 mahery isaky ny tanjonay.
Ataovy toy ny any an-trano ny trano fandroana rehetra miaraka amina fonony fipetrahana fidiovana taratasy mety be. Amin'ny vidiny ambany fotsiny dia azonao atao ny mividy tranga misy fonony 1250. Ny fonosana tsirairay dia misy fonony miisa 250, ka tsy mila mamerina miverimberina foana ianao.
Ireo fonosana seza fisoratan'efatra ireo dia manamora ny fanesorana azy ireo avy ao anaty boaty ary hivelatra amin'ny fampiasana haingana sy tsy misy ezaka alohan'ny hanariana azy ireo na handroahana azy ireo. Satria tsy azo ovaina izy ireo, dia tsy hanimba ny tontolo iainana ireo fonosana fidiovana mahasoa ara-tontolo iainana ary hanome anao fitoniana kely.
Lanja: 14g / m2, 15g / m2, 16g / m2,17g / m2
Fonosana: 200 pcs / boaty, boaty 25 / tranga
Pulp taratasy: fibre virijiny 100% na pulp namboarina
Size: 425mm * 360mm, na arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ireto fonosana seza mahomby ireto dia mety mba hitazonana ny fidiovana ho an'ny vahiny sy ny mpanjifa amin'ny vidiny ambany. Azonao atao koa ny mitondra azy ireo mora mitoby, amin'ny festival mozika, ary ny trano fidiovana mahazatra ho an'ny daholobe mba hahafahanao mijanona ho madio sy madio. Ireo fonony ireo dia natao mba hifanaraka amina dispenser amidy misaraka. Ny baoritra baoritra tsirairay avy dia misy torolàlana vita pirinty momba ny fomba hametrahana azy ireo amin'ny fomba mora sy tsy misy ezaka.
* FAMONJENA SY FAHAMARINANA- boaty iray fotsiny amin'ireo fonony fidiovana io no hahalasa anao mandritra ny fotoana be dia be. Ireo fonosam-pidiovana taratasy fidiovana mety ampiasaina ireo dia fonosana fonosana 250. Ny tranga tsirairay avy dia misy fonosana 5, manamboatra fonony 1250 mba hahafahanao mividy azy ireo indray mandeha ary toa maharitra mandrakizay izy ireo.
* NAMANA TONTOLO IAINANA- Tsy misy tahotra intsony hanimba ny tontolo manodidina anao raha ny madio fotsiny no tadiavinao. Ireto fonosana fidiovana feno fivoaran'ny tontolo iainana ireto dia voajanahary ka tsy maintsy ataonao fotsiny ny manary azy ireo na manosotra azy ireo. Vaky ara-dalàna izy ireo mba tsy hanimba ny tontolo iainana.
* STYLE FOLO SOA-Ireto fonosana fipetrahana fidiovana ireto dia fomba antsasa-manidina mba hanamorana azy ireo amin'ny fanesorana amin'ny baoritra. Mahatonga ny filana tolona sy adin-tsaina kely kokoa izany rehefa manandrana mamoaka azy ireo. Ny fomba antsasaky ny vala dia manamora ny famahanana azy ireo ary fampiasana haingana sy mahomby rehefa mila mandeha ianao.
* Mampiasà STANDALONE NA FITS INDRINDRA- Ny fonosana fonosana 250 tsirairay avy dia misy dispenser amin'ny baoritra tsotra azo ampiasaina irery na mora ampidirina ao anaty dispensera amidy samy hafa. Ireo fonosana ireo dia namboarina ho habe sy endrika mety hifanaraka amin'ny mpamatsy fonony mba hahamora ny fitehirizana sy ny fidirana noho ny taloha.
* VAROTRA mahomby sy mahasalama- Amin'ny vidiny mora toy izany, ireo fonosana fidiovana taratasy ireo dia hitazona ny fahadiovan'ny trano fidianao ary ho an'ny vahininao sy ny mpanjifanao. Izy ireo koa dia mahafinaritra amin'ny fitsangatsanganana an-toby, fitsangatsanganana, fampiasana an-trano na trano fidiovana ampahibemaso mba hahafahanao mijanona ho madio sy tsy hanana ahiahy.
HO AN'NY 20 taona mahery, Zhonghe Paper Products Ltd. dia namokatra ny tsara indrindra tamin'ny vokatra taratasy fanadiovana. Ny fonosan'ny sezakantsika sy ny vokatra vita amin'ny lamba famaohana taratasy dia ambony noho ny hafa rehetra eny an-tsena ankehitriny. Ny vokatra rehetra avy aminay dia vita amin'ny fibre premium ary ny akoranay rehetra dia avy amin'ny loharanon-karena maharitra. Avy amin'ny foibenay sy ny orinasa mpamokatra entana any Fengcheng, Sina, no mizara ny vokatray manerana an'izao tontolo izao.
Mino izahay fa ny vokatra ara-pahadiovana dia tsy tokony hanome fahafaham-po ny fahadiovana ihany fa ho mora ampiasaina ary mety koa.
Teo aloha: Plastika ABS Wall Mounted Lever mpizara
Manaraka: Toeram-pialana amin'ny kabine, 250 Sheets / fonosana, fonosana 20 / Carton
Fonosana fonosana taratasy fidiovana taratasy
Rochester Midland Half-Folded Toilet Severs Covers
Scott Covers Toeram-pidiovana fidiovana
Sarona fonenana Scott Toilet
Fonon-seza ho an'ny trano fidiovana, VOKATRA HYGIENE AIRCRAFT
OEM Factory ho an'ny China Anti-slip slip azo ampiasaina Toil ...
Fonony sezika am-polony